Izizathu Ezi-10 Isayithi Lakho Lilahlekelwa Izinga Le-Organic ... Futhi Yini Okufanele Uyenze | Martech Zone
Izizathu eziyi-10 Isiza Sakho Silahlekelwa Isimo Se-Organic… Nalokho Ongakwenza
NgoLwesithathu, Okthoba 21, 2020 NgoLwesithathu, Okthoba 21, 2020 Douglas Karr
Kunezizathu eziningi zokuthi iwebhusayithi yakho kungenzeka ilahlekelwe ukubonakala kwayo kosesho lwendalo.
Ukuthuthela kusizinda esisha - Ngenkathi iGoogle inikeza izindlela zokubazisa ukuthi uthuthele kusizinda esisha nge-Search Console, kusenenkinga yokuqinisekisa ukuthi yonke i-backlink laphaya ixazulula i-URL enhle esizindeni sakho esisha kunekhasi elingatholakali (404) .
Izimvume zenkomba - Ngibonile izimo eziningi zabantu abafaka izingqikithi ezintsha, ama-plugins, noma benza ezinye izinguquko ze-CMS ezishintsha ngokungaqondile izilungiselelo zazo futhi zivimbele isiza sazo ekukhangeni ngokuphelele.
Imethadatha engalungile - Izinjini zokusesha zithanda imethadatha efana nezihloko nezincazelo zekhasi. Imvamisa ngithola izingqinamba lapho amathegi esihloko, omaki besihloko se-meta, izincazelo zingagciniwe kahle futhi injini yokusesha ibona amakhasi angafuneki… ngakho-ke akhomba amanye awo kuphela.
Ukuphendula kweselula - Iselula ilawula izicelo eziningi zosesho lwendalo, ngakho-ke isayithi elingalungiselelwe lingahlupheka ngempela. Ukungeza amandla we-AMP kusayithi lakho nakho kungakhulisa kakhulu ikhono lakho lokutholakala kusesho lweselula. Izinjini zokusesha nazo zilungisa incazelo yazo yokuphendula ngeselula njengoba ukuphequlula kweselula kuguqukile.
Shintsha ekwakhiweni kwekhasi - Izinto ekhasini le-SEO zisezingeni elihle ngokubaluleka kwazo - kusuka esihlokweni kuye ezihlokweni, kuya kwesibindi / kugcizelele, kuma-media nakuma-alt tags… uma ushintsha ukwakheka kwekhasi lakho bese uhlela kabusha izinto ezibalulekile, kuzoshintsha indlela abakhasi ababuka ngayo okuqukethwe kwakho futhi ungalahlekelwa isikhundla salelo khasi. Izinjini zokusesha zingaguqula nokubaluleka kwezakhi zekhasi.
Shintsha ekuthandeni - Kwesinye isikhathi, isiza esinethoni yegunya lesizinda siyeke ukuxhumanisa nawe ngoba bavuselele isiza sabo futhi baphonsa i-athikili emayelana nawe. Ngabe ucwaningile ukuthi ubani osezingeni lakho futhi wabona noma yiziphi izinguquko?
Ukwanda komncintiswano - Izimbangi zakho zingenza izindaba futhi zithole ithoni yama-backlinks akhuphula izinga lawo. Kungenzeka kungabi nalutho ongalwenza ngalokhu kuze kuphele i-spike noma unyuse ukukhuthazwa kokuqukethwe kwakho.
Amathrendi angukhiye - Uke wahlola i-Google Trends ukubona ukuthi ukusesha kuhamba kanjani ezihlokweni obukleliswe kuzo? Noma igama langempela? Isibonelo, uma ngabe iwebhusayithi yami ikhulume ngayo Smartphones ngaso sonke isikhathi, ngingahle ngifune ukubuyekeza lelo gama libe ngu umakhala ekhukhwini ngoba lelo yigama elivelele elisetshenziswa kulezi zinsuku. Ngingahle futhi ngifune ukubuka izitayela zesizini lapha futhi ngiqinisekise ukuthi isu lami lokuqukethwe liqhubeka ngaphambi kwamathrendi okusesha.
Ukuzilimaza - Ungamangala ukuthi kukangaki amakhasi akho ancintisana nawo ezinjinini zokusesha. Uma uzama ukubhala iposi lebhulogi njalo ngenyanga ngesihloko esifanayo, manje usabalalisa igunya lakho nama-backlinks kumakhasi ayi-12 ngasekupheleni konyaka. Qiniseka ukuthi ucwaninga, wenza, futhi ubhale ikhasi elilodwa ngokugxila kwesihloko ngasinye - bese ugcina lelo khasi libuyekeziwe. Sisehlise amasayithi ezinkulungwaneni zamakhasi saya emakhulwini wamakhasi - siqondisa izethameli kahle - futhi sabuka ithrafikhi yabo ephindwe kabili.
Qaphela Izinsizakusebenza Zakho Zokusekwa Okungokwemvelo
Inani labantu enginalo abacela usizo lwami kulokhu liyamangaza. Ukwenza kube kubi kakhulu, bavame ukukhomba ipulatifomu noma i-ejensi yabo ye-SEO futhi balwe neqiniso lokuthi lezo zinsizakusebenza azizange zibikezele inkinga futhi azikwazanga ukusiza ukulungisa inkinga.
SEO Amathuluzi - Kuningi kakhulu okusemathinini Amathuluzi we-SEO ezingagcinwanga zisesikhathini. Angimane ngisebenzise noma yiliphi ithuluzi lokubika ukungitshela ukuthi yini okungahambi kahle - ngikhasa isiza, ngingene ngaphakathi kwekhodi, ngihlole zonke izilungiselelo, ngibuyekeze umncintiswano, bese ngithola ibalazwe lokuthi ngithuthuka kanjani. AbakwaGoogle abakwazi ngisho nokugcina i-Search Console ngaphambi kwezinguquko zabo ze-algorithm… bayeke ukucabanga ukuthi ithuluzi elithile lizokwenza!
Ama-SEO Agencies - Ngikhathele ama-ejensi we-SEO nabonisi. Eqinisweni, angizihlukanisi nokuthi ngibe ngumxhumanisi we-SEO. Ngenkathi ngisize amakhulukhulu ezinkampani ngalezi zinkinga eminyakeni edlule, ngiphumelele ngoba angigxili ekuguqulweni kwe-algorithm nasekuxhumaniseni i-backlinking… ngigxila kulwazi lwezivakashi zakho kanye nezinhloso zenhlangano yakho. Uma uzama ukwenza ama-algorithm wegeyimu, ngeke ushaye izinkulungwane zonjiniyela be-Google namandla amakhulu wekhompiyutha abanakho… ngethembe. Ziningi kakhulu izinhlaka ze-SEO ezakhiwe ngaphandle kwezinqubo eziphelelwe yisikhathi nama-algorithms emidlalo - angagcini ngokusebenza - azolimaza i-longterm yegunya lakho lokusesha. Noma iyiphi i-ejensi engaqondi isu lakho lokuthengisa nokumaketha ngeke ikusize ngecebo lakho le-SEO.
Inothi elilodwa kulokhu - uma uzama ukushefa izinsalela ezimbalwa zethuluzi lakho noma isabelomali somxhumanisi… uzothola lokho okukhokhelayo. Umxhumanisi omkhulu angakusiza ukuthi ushayele ithrafikhi ephilayo, usethe okulindelwe okungokoqobo, unikeze izeluleko zokumaketha ngale kwenjini yokusesha, futhi akusize uthole inzuzo enkulu otshalweni lwakho. Isisetshenziswa eshibhile cishe sizolimaza amazinga akho bese sithatha imali sibaleke.
Ungazikhulisa Kanjani Izilinganiso Zakho Zemvelo
Ingqalasizinda - Qinisekisa ukuthi isiza sakho asinazo izingqinamba ezivimbela izinjini zokusesha ekuzihleleni kahle. Lokhu kusho iqhakambisa uhlelo lwakho lokuphathwa kokuqukethwe - kufaka phakathi ifayela le-robots.txt, imephu yesayithi, ukusebenza kwesayithi, amathegi esihloko, imethadatha, ukwakheka kwekhasi, ukuphendula kweselula, njll. Akukho nokukodwa kwalokhu okukuvimbela ukuba ukleliswe kahle (ngaphandle kokuthi uvimba ngokuphelele izinjini zokusesha ekukhombeni isiza sakho), kepha kuyakulimaza ngokungakwenzi kube lula ukukhasa, ukukhomba, nokukala okuqukethwe kwakho ngokufanele.
Isu Lokuqukethwe - Ucwaningo, ukuhlelwa, kanye nekhwalithi yokuqukethwe kwakho kubalulekile. Eminyakeni eyishumi eyedlule, ngangijwayele ukushumayela ukuvama nokuvama kokuqukethwe ukukhiqiza amazinga angcono. Manje, ngeluleka ngalokho futhi ngigcizelela ukuthi amaklayenti akhe ifayili le- umtapo wokuqukethwe lokho kuphelele, kufaka nabezindaba, futhi kulula ukuyisebenzisa. Isikhathi esiningi esitshaliwe ku ucwaningo lwegama elingukhiye, ucwaningo lokuncintisana, isipiliyoni somsebenzisi, kanye nekhono labo lokuthola imininingwane abayifunayo, kungcono okuqukethwe kwakho kudliwe futhi kwabelwane ngakho. Lokho, nakho, kuzoshayela ithrafikhi eyengeziwe yemvelo. Ungahle ube nakho konke okuqukethwe okudingayo, kepha uma kungahlelwanga kahle, ungahle ulimaze amazinga wakho wenjini yokusesha.
Isu Lokukhuthaza - Ukwakha isiza esihle nokuqukethwe okumangazayo akwanele… kufanele ube nesu lokukhuthaza elishayela izixhumanisi zibuyele kusayithi lakho lezinjini zokusesha ukuze zikubeke ngaphezulu. Lokhu kudinga ucwaningo ukukhomba ukuthi izimbangi zakho zikleliswe kanjani, ukuthi ungangena yini kulezo zinsizakusebenza, nokuthi ungazithola noma cha izixhumanisi ezivela kulezo zizinda ngegunya elikhulu kanye nezithameli ezifanele.
Njengayo yonke into esemkhakheni wokumaketha, kwehlela kubantu, ezinkambisweni, nasemapulatifomu. Qiniseka ukuthi usebenzisana nomxhumanisi wokumaketha wedijithali oqonda zonke izici zokwenza kahle izinjini zokusesha nokuthi zingaluthinta kanjani uhambo lwamakhasimende akho jikelele. Futhi, uma unentshisekelo yokuthola usizo, ngiyanikela ngalezi zinhlobo zamaphakeji. Baqala ngokukhokha phansi ukumboza ucwaningo - bese beba nokuzibandakanya okuqhubekayo nyangazonke ukukusiza uqhubeke nokwenza ngcono.
Xhuma naye Douglas Karr
Tags: umtapo wokuqukethweisu lokuqukethwesimo organicukusesha okuphilayoizitayela zokusesha eziphilayoukubonakala kosesho lwe-organicseoumeluleki we-seoseo kokubonisanaukufuduka kwe-seoamazinga we-seoama-seo amathuluzi
IDroppTV: Kusetshenziswa i-AI ukuthola nokuthengisa imikhiqizo kumavidiyo
Indlela Yokukala, Ukugwema, Nokunciphisa Amanani Okuyekelwa Enqoleni Ephakeme